အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ၏လိမ်လည်လှည့်စားသည့်ဘဝ၊ စိတ်ခံစားမှုကိုပျက်ပြားစေသောအမှန်တရားများ လက်ရှိစာပေ
Juan Ortiz | 28/04/2021 15:58 | စာရေးဆရာများ, စာအုပ်များ, Novela
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်စက်တင်ဘာလတွင်အီတလီစာရေးဆရာအယ်လီနာဖာရန်ကသူမ၏ဝတ္ထုကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည် လူကြီးများ၏လိမ်လည်ဘဝ, တစ် ဦး အငြင်းပွားစရာမရှိတဲ့အယ်ဒီတာအဖွဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်လာ။ ထို့အပြင်စာရေးသူသည်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကိုမသိသောကြောင့်သူမအားအမည်ဝှက်ခြင်းကြောင့်၎င်းဝတ္ထုသည်အများပြည်သူအတွက်ပိုမိုဆွဲဆောင်မှုရှိပုံရသည်။ ဤသဘောမျိုးဖြင့်မိန်းကလေးသည်အရွယ်ရောက်သူများ၏ဝှက်ထားသောအကျင့်များကိုပြုလုပ်သောရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၏ဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။
ဒီအငြင်းအခုံလက်အောက်မှာစိတ်ခံစားမှုကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့အမှန်တရားတွေကိုဖွင့်ဟလာခြင်းကြောင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ပconflictိပက္ခဖြစ်ရပ်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, အဆိုပါဇာတ်ကြောင်းပြော, Giovanna, gimmicks မပါဘဲ, ပထမ ဦး ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အတွက်သူမ၏အတွေ့အကြုံများနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချပြောပြသည်, ဖြစ်ရပ်များအကြောင်းကိုစာဖတ်သူကို။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ဇတ်ကောင်များဆီသို့သွယ်ဝိုက်။ စည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
1 စာရေးသူအကြောင်း Elena Ferrante အကြောင်း
1.1 အယ်လီနာ Ferrante, သူမ၏စာပေထုတ်ကုန်
2.1 ကန ဦး ချဉ်းကပ်မှု
စာရေးသူအကြောင်း Elena Ferrante အကြောင်း
ဒီစာရေးဆရာအတွက်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောနာမဝိသေသနသည်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်သုံးခုကသူမ၏ပထမဆုံးဝတ္ထုကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပြီးကတည်းကမလွှဲမရှောင်သာအဆက်မပြတ်ဖြစ်သည်။ ကောင်းပြီ ယနေ့အထိစာရေးသူ၏မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအီးမေးလ်ဖြင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းထက် ကျော်လွန်၍ မသေချာပါ။ သူမသည် ၁၉၄၃ ခုနှစ်တွင်အီတလီနိုင်ငံ၊ နေပယ်လ်တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီးအယ်လီနာဖာရန်တီသည်အမည်ဝှက်ဖြစ်သည်ဟုသာသိသည်။
ဤအကြောင်းများကြောင့်စာရေးသူနှင့်ပတ်သက်သောယူဆချက်သာရှိသည်။ ထို့အပြင်သူ၏စာဖတ်သူများအနေဖြင့်သူ၏ဝတ္ထုများသည်ကိုယ်တိုင်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိများဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်, ထုတ်ဝေအသစ်တစ်ခုကိုအယ်လီနာ Ferrante ကျိန်းသေသူသည်အထဲကရှာတွေ့မှသီအိုရီများနှင့်သုတေသနနှင့်အတူလိုက်ပါသွားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်စာရေးသူနှင့်ပတ်သက်သောအသုံးအများဆုံးအတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်များကိုသူမ၏စာပေများဖြင့်မှတ်သားထားသည်။
အယ်လီနာ Ferrante, သူမ၏စာပေထုတ်ကုန်
ဤကိစ္စသည်အမည်မသိရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သောအီတလီစာရေးဆရာတစ် ဦး မဟုတ်ပါ။ အမေဇုံပေါ်တယ်ထောက်ပြသည့်အတိုင်းသို့သော်၊ ဤမိန်းမသည် "လက်ရှိစာပေတွင်အကြီးမားဆုံးထူးခြားချက်" ဖြစ်သည်။ ထိုနေရာတွင်ကမ္ဘာတစ်လွှားရှိနိုင်ငံပေါင်း ၄၆ နိုင်ငံမှစာကြည့်တိုက်ပေါင်း ၂၀၀၀၀,၀၀၀ ကိုစိတ်ဝင်စားသည်ဟုဆိုသည်။ ဖြည့်စွက်ကာ, လူကြီးများ၏လိမ်လည်ဘဝ မဂ္ဂဇင်းကရွေးချယ်ထားသောစာအုပ် ၁၀၀ အနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည် အချိန်.
ထို့ကြောင့်သူမ၏စာပေများတည်ရှိနေခြင်းကြောင့်သူမသည်တကယ့်စာရေးဆရာတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ အမည်၊ အယ်လီနာဖာရန် (သို့မဟုတ်သူမမည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်) သူသည်စာရေးဆရာမတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာသူမ၏ဝတ္ထုများ (အားလုံးအထက်တွင်) ကသူမအားလူထုဘဝပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်သူမ၏ဝတ္ထုများသည်စာသားဖန်တီးသူနှင့် ပတ်သက်၍ မှန်ကန်သောရည်ညွှန်းစာရွက်စာတမ်းများအစုံအလင်ပါ ၀ င်သည်ဟုဆိုနိုင်ပါသည်။
အယ်လီနာဖာရန်သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်ဥရောပတစ်ခွင်ကျော်ကြားလာခဲ့ပြီးသူမသည်စာအုပ်လေးအုပ်၏နောက်ကွယ်တွင်စတင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ အဖြစ်လူသိများအဆုံးစွန်သော၏ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်စတုတ္ထမြောက်ဝတ္ထုသည်လူကြိုက်များသောလက်ခံမှုဖြင့် (စပိန်ဘာသာဖြင့်) ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ အခုမင်းရဲ့ ပထမဆုံးပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းကို ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင်အီတလီဘာသာစကားဖြင့်ထုတ်ဝေခဲ့သည် နှောင့်အယှက်မတ်ေတာ, 2002 ခုနှစ်တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန် စွန့်ပစ်သောနေ့ရက်များ.
နောက်ပိုင်းတွင်သူထုတ်ဝေခဲ့သည် မှောင်မိုက်သမီး (2006), ကထူးခြားတဲ့စာပေဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်၏အရိပ်လက္ခဏာပြသရှိရာအစွမ်းထက်ဇာတ်ကြောင်းနှင့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ဇာတ်ကောင်နှင့်အတူဝတ္ထု။ အရင်ကပြောခဲ့သလိုပါပဲ ၂၀၁၁ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်အကြား၌သူ့အားခွဲခြားဆက်ဆံမှုကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့၏ပစ်လွှတ်နှင့်အတူ လူကြီးများ၏လိမ်လည်ဘဝ (၂၀၂၀)၊ အယ်လီနာဖာранတီသည်မိမိကိုယ်ကိုကြီးကျယ်သောစာပေဖြစ်စဉ်အဖြစ်တည်ထောင်ခဲ့သည်။
ဒီဝတ္ထုထဲမှာအယ်လီနာဖာရန်တီ Giovanna သည်မိန်းကလေးတစ် ဦး အနေဖြင့်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်သည့်သူမ၏မိဘများ၏လိမ်လည်မှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သူကသူ့အဖေကိုသမီးဖြစ်သူရဲ့စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်စကားကိုကြားသိရ (သူမသိဘဲမသိပဲ) ကြားလျှင်၎င်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤနည်းအားဖြင့်မိန်းကလေးသည်အဖြစ်မှန်အသစ်တစ်ခုနှင့်ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းမှာသက်ကြီးရွယ်အိုများမည်မျှလိမ်သည်ဆိုသည်ကိုပင်သူနှင့်အနီးဆုံးသူများကိုပင်သူနားလည်သည်။
မလွှဲမရှောင်, ထိုကလေးငယ်သည်သူမ၏မိသားစု၏မုသားနှင့်အပြုအမူများကြောင့် (၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်ဖွင့်လှစ်သောနော်ဝေးလူမျိုးဓနရှင်လူတစ် ဦး)။ ဒါကြောင့် Giovanna ကသူမရဲ့ဖခင်ကသူမမသိတဲ့သူမအဒေါ် Vittoria လိုရုပ်ဆိုးတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။
အကျိုးဆက်အနေဖြင့်သူသည်ဤအဒေါ်ကိုရှာဖွေပြီးစီးပွားရေးအခြေအနေနိမ့်ကျသည့်ဗစ်တိုရီးယားနှင့်တွေ့ဆုံသည်အထိသူမမိသားစုကိုသံသယဝင်ခဲ့သည်။ Giovanna သူမ၏အဒေါ်သည်ပရမ်းပတာဘဝနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အမျိုးသမီးဖြစ်သည်ကိုတဖြည်းဖြည်းနားလည်လာသည်သူ့မိဘများ၏နေ့စဉ်ဘ ၀ နှင့်ခြားနားသည်။
ယခင်စာပိုဒ်များတွင်ဖော်ပြထားသောအခြေအနေများကြောင့် Giovanna (ပုံမှန်စာဖတ်သူ) သည်စာအုပ်များတွင်မိမိကိုယ်ကိုပိုမိုစွဲမြဲစေသည်။ ဖြည့်စွက်ကာ, အဆိုပါမြီးကောင်ပေါက်ယေဘုယျအားဖြင့်လေ့လာမှုနှင့်ပညာရေး၏အရေးပါမှုကို internalizes ။ ဤအခြေအနေတွင်ရောဘတ်တိုကသူမအားလေ့လာသင်ယူမှုအသစ်ရှာဖွေရန်နှင့်သူမနှင့် ပတ်သက်၍ မြင့်မားသောမျှော်လင့်ချက်များကိုတည်ဆောက်ရန်လှုံ့ဆော်ပေးသောဆရာတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
ဤနည်းအားဖြင့်, အဆိုပါဇာတ်ကြောင်းတိုးတက် - ကခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်လေးနှစ်ကာလကိုဖုံးလွှမ်း - ဗဟိုပုံပြင်နှင့်အပြိုင်အခြားသေးငယ်တဲ့ပုံပြင်များနှင့်အတူ။ အဆုံးဆီသို့ ဦး တည်ပြီး လူကြီးများ၏လိမ်လည်ဘဝမိန်းကလေး၏သေချာမှုသည်“ လိုအပ်သောသံသယ” ဖြစ်လာသည်။ ယခုအချိန်တွင်ဘာမျှမပြောဘဲအရေးအကြီးဆုံးမှာအသိပညာအသစ်ကိုကန့်သတ်ခြင်း (သို့) ဆင်ဆာတည်းဖြတ်ခြင်းမခံရရန်ဖြစ်သည်။
Elena Ferrante ၏ဤနောက်ဆုံးထုတ်ဝတ္ထုတွင်ဖြစ်ရပ်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်အပြန်အလှန်ဆက်စပ်နေသည်။ ထိုအကြောင်းအရာများအနက်အများစုသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်လိမ်လည်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်စာရေးသူသည်သူမနှင့်ကောင်းမကောင်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသောဆယ်ကျော်သက်တစ် ဦး မှတစ်ဆင့်၎င်းကိုချဉ်းကပ်သည်။
လူကြီးများ၏လိမ်လည်ဘဝ Giovanna တွင်ကလေးဘဝကောင်းမြတ်ခြင်း၏စံပြပြိုကွဲမှုကိုပြောပြသည်၊ အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်သောကြောင့်နာကြည်းသောလိမ်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်အနီးအနားရှိလှည့်စားမှုမတွေ့ရှိမီဤဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သည်အမှန်တရားရှာဖွေခြင်းဆီသို့ ဦး တည်သောလမ်းကိုမြင်သည်။ မျှော်လင့်ခြင်းသည်အဆုံးအဖြတ်ပေးသောပြbecomesနာဖြစ်လာသည်။
ဇာတ်ကောင်သည်အလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောအဆင့်တွင်မိန်းကလေးတစ် ဦး ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြီးထွားမှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရေးကြီးသောပconflictsိပက္ခများကိုမရှောင်လွှဲနိုင်ပါ။ Giovanna အမျိုးသမီး၏စိတ်သည်၎င်းကိုယ်တိုင်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှင့်ထိုခံစားချက်များအပေါ်များစွာမူတည်သည်။ မည်သူသည်လူများ၏ပုံပန်းသဏ္theာန်၏အရေးပါမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အထူးဖွင့်ဟဖော်ထုတ်မှုများကိုရောက်သည်
အောင်မြင်ခြင်း လူကြီးများ၏လိမ်လည်ဘဝ ၎င်းသည်စာရေးသူမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းနက်နဲသောအရာမဟုတ်ပါ။ တနည်းအားဖြင့်အဲလီနာဖာранတီ၏စာပေအရည်အသွေးကိုအသိအမှတ်မပြုခြင်းသည်မတရားသည်။ ထို့ကြောင့်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်သက်ဆိုင်သည် ၎င်းသည်စာဖတ်သူများကိုအမှန်တကယ်ပါ ၀ င်သည့်လူတစ် ဦး ဇာတ်ကြောင်း၏ထိုးဖောက်စတိုင်ဖြစ်သည်။
အကျိုးဆက်အား ဇာတ်ကောင်များပြောသောဇာတ်ကြောင်းသည်ရင်းနှီးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတုပပြီး၊။ အမှန်မှာ၊ ဇာတ်လမ်းစတင်သည်နှင့်စာဖတ်သူများသည်၎င်းတွင်အသိအမှတ်ပြုခံရပြီးအဆုံးတိုင်အောင်ရှာဖွေမှုတွင်လိုက်ပါလိုကြသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - လက်ရှိစာပေ » စာပေ » စာရေးဆရာများ » လူကြီးများ၏လိမ်လည်ဘဝ
Bernard Minier ။ ဗိုလ်မှူးမာတင် Servaz အားဖြင့်သူ့စီးရီး၏ပြန်လည်သုံးသပ်